क्याप्टेन लामाले खोजे युवाको साथ : हाले सर्वोच्चमा मुद्दा ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	क्याप्टेन लामाले खोजे युवाको साथ : हाले सर्वोच्चमा मुद्दा ! » Nepal Fusion
क्याप्टेन लामाले खोजे युवाको साथ : हाले सर्वोच्चमा मुद्दा !
२०७६ साउन ४ गते शनिवार
नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ट पाइलट क्याप्टेन विजय लामाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्राधिकरणले एक दिन लाइसेन्स रद्द गरेको र झुटो आरोप लगाएको भन्दै प्राधिकरणको सुरक्षा विभागसहितलाई विपक्षी बनाएर क्याप्टेन लामाले मुद्दा दायर गरेका हुन्। नियमक निकायविरुद्ध नेपालमा पहिलो पटक पाइलटले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उनले प्राधिकरणका वरिष्ठ क्याप्टेन डीआर निरौलासहितको टिमलाई मुद्दा दायर गरेका हुन्। लामाले केही समय अगाडि सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तालाई लिएर प्राधिकरण नेतृत्वले पाइलटको लाइसेन्सनै निलम्बन गरेको थियो।
पाइलट लामाले उडानका क्रममा आफू शारीरिक र मानसिक रुपमा तनावमा रहने अन्तर्वार्ता दिएपछि प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले लामालाई प्रवक्ताबाट हटाउनसमेत माग गरेको थियो।
निगमले सोही दिन वैशाख १६ गते नै प्राधिकरणको दबाबमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो। त्यही दिननै लाइसेन्स रद्द फुकुवा गरेको थियो। ‘मुद्दा दायर गरेर अहिले मेरो टिमले यस विषयमा थप छलफल गरिरहेको छ,’ क्याप्टेन लामाले भने।
मुद्दामा गएको विषयमा आफूलै धेरै नबोल्ने समेत उनको भनाइ छ। प्राधिकरणविरुद्धको मुद्दाको पेसी भने सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते बिहीबारको लागि तोकेको छ।